Ururka Al-shabaab oo dad ku xirxiray magaalada Balcad ee gobolka Sh.dhexe – Radio Daljir
Ururka Al-shabaab oo dad ku xirxiray magaalada Balcad ee gobolka Sh.dhexe
Balcad May, 03 – Ugu yaraan 16 qof oo beeralay ah ayaa maanta uu ururka alShabaab ku xidhay degmada Balcad ee gobolka Sh/dhexe.
Xidhitaanka beeralaydan ayaa ka dambeeyey markii ay Shabaab ku amreen dadkaasi in ay bixiyaan lacago, taas oo qof kasta la faray bixinta 400,000 Sh So, balse kuwii aan bixin xadhig lagula kacay.
Saraakiil ka tirsan alShabaab ayaa sheegey in lacagahaasi wax kaga qabanayaan burburka waddada laamiga ah ee dhex marta magaaladaas, laakiin Cali Axmed Jimcaale oo ah beerallay ku dhaqan degmadaas ayaa Daljir u sheegey in lacago hore oo dadka laga qaaday aan lagu qaban wixii la faray, sidoo kalena dadka degaankaasi ay wali la ildaran yihiin abaarihii sida guud ugu dhuftay dalka.
Ma aha markii ugu horraysay ee qaar ka mid ah shacabka degmadaasi ay xadhig wadareed kala kulmaan alShabaab. Sannadkii hore ayay ahayd markii haweenka magaaladaas oo la faray in ay xidhaan nooc ka mid ah jalaabiibka, qaar badan oo ka mid ah la xidhay, kuwaas oo ay alShabaab ku eedeeyeen in ay baalmareen wixii la faray.
Dadka ku dhaqan gobollada koonfureed ee dalka ayaa la kulma xadhig iyo cadaadis uga yimaadda dhincyada isku haya siyaasadda iyo awoodda ee alShabaab iyo DFKM.